Naannoo Soomalee godina Shinillee keessatti mormiin geggeeffamaa jira
NuuralHudaa	 Apr 22, 2018 0
Jiraattoonni naannoo Soomalee Godina Shinillee bulchiinsa naannichaa balaaleffatuun mormii geggeessaa jiran. Mormii guyyoota lama dura Shinillee keessatti jalqabame too'achuudhaaf mootummaan naannichaa Liyyuu poolisii gamasitti kan bobbaase…
Manni murtii Faransaay dubartii Muslimaa qondaala harka fuudhuu diddee lammummaa dhoorkate
Biyya Faransaayitti Bulchiinsi naannawa Isere June 2016 dubartii muslimaa dhalootaan Aljeeriyaa taate sirna kenniinsa lammummaa irratti qondaala harka fuudhuu diduu isiitiif paaspoortii lammummaa Faransay dhoorkate. Dubartiin abbaan warraa…
Kooriyaan Kaabaa sagantaa Yaalii Nukilarii fi Misaa’elaa geggeessaa turte Xumuruu beeksifte
NuuralHudaa	 Apr 21, 2018 0
Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong Un biyyi isaa yaalii nukilarii fi miisaa’elaa xumuruu beeksise. Prezdaant Kim Jong Un akka jedhetti, Sagantaan hujii Nukilarii gabbisuu fi Yaaliin Misaa'elaa biyyi isaa gaggeessaa turte karaa saayinsaawaa…
Imbaasiin Ameerikaa Ustaaz Ahmaddiin Jabali fi Obbo Andu’alem Arraagee Viisaa Ameerikaa…
Dhaabbanni Atlaantik Kaawunsil jedhamu namoota hawaasa isaanii biratti jalaatamoo jedhaman filatuun kora irratti kan affeeru yoo tahu, Itoophiyaa irraa namoota 4 kan ummata biratti fudhatama qaban jechuun akka kora isaa irratti hirmaataniif…
Paarlaamaan Muudama Kaabinee Muummichi ministeeraa dhiheesse raggaasise
NuuralHudaa	 Apr 19, 2018 0
Muummichi ministeeraa Dr Abiy Ahmad Kaabinee haaraya ijaare ganama har'aa paarlaamaaf dhiheessuun raggaasise. Dr Abiy muudama miniseerota haaraya 10 fi ministeerota 6 ammoo iddoo duraan turan irraa jijjiiruun dhiheesse. Ministeeronni har'a…
Muummichi Ministeeraa guyyaa boruu Kaabinee isaa Paarlaamaaf dhiheessuun ni raggaasisa jedhamee…
NuuralHudaa	 Apr 18, 2018 0
Manni Maree bakka bu'oota Ummata guyyaa boru kora idilee kan geggeessu yoo tahu, muummichi minnisteeraa Dr Abiy Ahmad walgahii kana irratti argamuun kaabinee isaa haarawa kan raggaasisu tahuu FBC'n gabaase. Akka gabaasa FBCtti…
Daandiin magaalaa Adamaa irraa gara Diksiis geessu cituun ummanni rakkataa jira.
Godina Arsii magaalaa Diksiis iddoo Kaampii Chaayinaa jedhamutti daandiin Cituun konkolaataan magaalaa Adaamaa irraa gara Diiksiis deemu, akkasumas geejjibni magaalaa Diksiis irraa bahu ganama har'aa irraa kaasee kan dhaabbate tahuu…
Kaffaltiin imala Hajjii fi Umraa birrii 22,000 dabaluun ibsame
Galmeen imala hajjii fi Umraa bara kanaa torban dabre keessa kan jalqabame yoo tahu, kaffaltiin bara kanaa kan waggaa dabree caalaa haalaan kan dabale tahuunis beekameera. Imala hajjii bara kanaa irratti nama tokkoof birrii 98,800 kan…
Bulchiinsi Mootummaa Naannoo Oromiyaa muudama hooggansa haaraya gaggeessuu beeksise
Bulchiinsi Mootummaa Naannoo Oromiyaa muudama hooggansa haarayaa kan geggeesse tahuu gabaasni Biiroo dhimmoota Kominikeeshiinii naannichaa irraa argame ni ibsa. Hooggaanaan Biroo Dhimmoota Kominikeeshiinii Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa…
Liyyuu poolisiin naannoo Somalee ummata nagayaa irratti boombii darbe.
Liyyuu poolisiin naannoo Somalee ganama har'aa magaalaa Mooyyaalee keessatti ummata nagayaa irratti bombii darbachuun miidhaan guddaan kan dhaqqabe tahuu waajjirri Kominikeeshiinii Aanaa Mooyyaalee gabaase. Sababa kanaan hanga ammaatti…